yeruzhinji-nzvimbo-magetsi - Conssin Lighting Co, Ltd.
Veruzhinji nzvimbo mwenje weLEM
Conssin mwenje mwenje kugadzirisa kuchengetedzeka neyakagadzirirwa kujekesa rima ruzhinji nzvimbo, nzira dzekufamba, nzira dzekubuda nedzokupinda.
Zvigadzirwa zvakavakirwa kurarama zvisingashivirike nharaunda.
Conssin Mwenje yekuvaka mwenje mwenje ye LED inogadzirwa uye yakagadzirirwa kuti ishandiswe kune chero rudzi rwekusika kuchinjika, ichipa mari yakawanda mukushandisa kwesimba.
Mwenje yedu yeLED yakagadzirirwa kugadzira uye kuratidza mapurani ekugadzira uye dhizaini yemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa. Ivo anowanzo shandiswa kuumba zvirevo zvekuvaka kana kugadzira zvakasarudzika zvezvinhu zvakasarudzwa. Yedu LED mwenje mwenje inouya mune akasiyana maumbirwo uye mavara, ichibvumira yakashinga dhizaini uye yekugadzira matauriro.
Yakagadzirirwa kumisikidza nyowani nyowani uye nyore kudzosera kune iripo HID cobra musoro-dhizaini zvigadziriso, yedu yepamusoro-giredhi aruminiyamu chiwanikwa dzimba ine yakakwira-yakasimba mukusimbisa poda kupfeka inopa kwakanyanya kuita uye hurefu hurefu mune chero nharaunda.
Dzidza zvakawanda nezve MPG1
Dzidza zvakawanda nezve MPG2
Dzidza zvakawanda nezveSMS1
Conssin mwenje mwenje dhizaini yenzvimbo yekuvhenekesa yakakwana yekugadzira yakajeka mwenje yekupaka nzvimbo dzekupaka, nzira dzekufamba, auto dealership, matare emitambo nenzvimbo dzekutamba.
Mwenje yenzvimbo dze LED dzinotangira pamakumi matatu emawati kusvika ku1000watts ane akasiyana magetsi akagoverwa. Yedu yese yeedu epanze nzvimbo mwenje mwenje ine 5year garandi.
Conssin LED Nharaunda Chiedza inonunura kirasi-inotungamira kushanda nesimba, mashandiro uye kuvimbika kwekuita kwakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana dzekushandisa munzvimbo dzinonetsa kwazvo.
Kunyanya kuvaka kuti zvienderane nenzvimbo yekuvhenekesa kunyorera yedu MPG1 uye MPG2 dzakateerana inopa ekuchengetedza-kwemahara mwenje iwe waunogona kuvimba nayo neasingaenzanisike kujeka kujekesa kwehuwandu hwekuchengetedza nekuchengetedza.
Akatungamira Street Kujekesa.
Chivabvu 13, 2014
Akatungamira mumugwagwa mwenje
Conssin Mheni yazvino LED mwenje pamusika ndeye Street master nhepfenyuro zvakanyanya dhizaini pane chikumbiro chehurumende yemuno muAustralia.
Mhando yeSMS LED mwenje fittings inosanganisa yazvino standard inoshandiswa muUSA neAustralia kune veruzhinji mwenje. Izvo zvinoburitswa zvinoumba 20 Watts dhizaini yeruzhinji magetsi mumigwagwa nemigwagwa inoenda ku120 Watts dhizaini yemigwagwa mikuru, nzira mbiri dzekutakura.
Tiri kushandisa yazvino matekinoroji Cree LED sosi ine inoshamisa 135L / W, Phillips mutyairi ane inodzika kugona uye guta kubata kubata. Yakasarudzika goko dhizaini ine casted aluminium muviri inobvumira inogara kwenguva refu yekuchengetedza yemahara hupenyu.
Architectural - mwenje yemigwagwa
Isu tinokurudzira iyi sarudzo mapurojekiti ehurumende nenyika yehurumende se: migwagwa, migwagwa mikuru, mabhiriji, mota mapaki zvimwe zvivakwa.
Veruzhinji nzvimbo mwenje mwenje masystem aunogona kuvimba.
Akatungamira Tambo Mwenje, Yakakwira Bay Lighting Yakatungamirwa, Akatungamira Solar Spot Mwenje, Yakakwirira Simba Yakatungamirwa Mwenje, Kunze Kwemitambo Dare Mwenje, Akatungamirira Scene Chiedza,